Cajalad laba-geesood ah, oo ah saaxiibka ugu fiican ee DIY guriga | Ragga Stylish
Cajalad laba-geesood ah, oo ah saaxiibka ugu fiican ee DIY guriga
Ragga Stylish | | nololeedka
Cajalad laba-geesood ah ayaa xulafo ku ah sanduuqayaga qalabka. Qodista daloolada derbiyada ama noocyada kale ee hagaajinta farsamada waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah oo waxyeello u geysan kara maaddada. Si kastaba ha noqotee, waxaan leenahay isbahaysi kaamil ah, cajalad laba-gees leh. Laakiin waa inaan maskaxda ku haynaa in tayadiisu ay naga dhigi karto inaan ku guuleysano ama ku guuldareysano shaqadayada DIY ee guriga. Ma jiraan wax keenaya qanacsanaan ka weyn shaqo si fiican loo qabtay, markaan ku qabannay gacmaheenna. Laakiin marka aynaan khabiiro ahayn, caawimaadda noocan ah ee laga helo noocyada la aqoonsan yahay waxay natiijada ka dhigi kartaa mid la yaab leh. Waxaan kuu sheegeynaa faa iidooyinka ku jira adeegsiga cajalad laba-geesood ah oo ku jirta howlahayaga DIY.
1 Waa maxay cajalad laba dhinac ah?
2 Sidee loo isticmaalaa cajalad laba dhinac ah?
3 Isbahaysiga saxda ah, waxa loo isticmaalayo cajaladda koolada laba-geesoodka ah
4 tesa® Powerbond, qoyska ugu fiican cajaladaha xabagta ee labada dhinac leh
5 Tesa Powerbond cajaladaha koolada iyo codsiyadooda
6 Waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka tesa®powerbond?
Waa maxay cajalad laba dhinac ah?
Cajaladaha dhejiska laba-geesoodka ah, sida magacooda ka muuqata, waa xaashiyo leh shey xabag ah oo ku yaal labada dhinac ee dusha sare, taas oo na siin doonta taageerada lagama maarmaanka u ah hagaajinta laba qalab iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo qalabka wax lagu dhejiyo sida boolal, ama godad laga sameeyo. darbiyada. Waxaan ka helnaa noocyo kala duwan oo cajalado isku dhegan oo laba-dhinac ah, iyadoo kuxiran shaqada aan qaban doonno, laakiin gadaal ayaan kaaga sheegi doonaa taas.
Sidee loo isticmaalaa cajalad laba dhinac ah?
Sidoo kale sharaxaad ka bixiyay muuqaalkii hore, cajalad laba-geesood ah waa wax fudud in la isticmaaloWaxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan si fiican u nadiifino mid ka mid ah qaybaha aan rabno inaan hagaajino, si aan hadhow ugu dabaqno cajaladda koolada dhinaca aan dooneyno. Waxaan xasuusnaa in labada dhinacba ay leeyihiin xabag, sidaa darteed wax dhibaato ah ma jiri doonaan.
Kadib, waan nadiifin doonaa dusha sare ee aan dooneyno inaan ku dhajino shayga. Waa muhiim in labada dusha ka qalalan yihiin si ay u siiyaan iska caabin buuxda oo ah badeecada. Hadda waa inaan iska siibnaa qalabka wax lagu ilaaliyo oo aan labada shayba ku riixnaa meesha la doonayo dhowr ilbiriqsi, illaa inta kooladu ay gareyso meel ku filan si aan u hubino natiijooyinka.
Isbahaysiga saxda ah, waxa loo isticmaalayo cajaladda koolada laba-geesoodka ah
La cajalad laba dhinac ah Waa wax aad u badan, waxaa loo isticmaali karaa tiro aad u tiro badan oo ah howlaha DIY, iyo sidoo kale dayactirka sida ku cad waxyaabaha guriga iyo xirfadda ku jira. Waxaan qori doonnaa liis wanaagsan oo ah waxyaabaha aan si hufan u hagaajin karno iyadoo ay ugu wacan tahay cajaladaha dhejiska laba-geesoodka ah, ee laga yaabo in badan oo ka mid ah oo aadan horay uga fikirin, laakiin safar aad ugu tagto dukaanka qalabka si aad uhesho badeecada noocan ah waxay kaa badbaadin kartaa saacado badan oo shaqo ah, Waxayna ku siin doontaa natiijo isku mid ah waxaad filaysay, maxaa yeelay mararka qaarkood, wax kayar ayaa ka badan.
Katiifadda roogga guriga: Meelo badan, bedelka saxda ah ee parquet ama sagxadda dhulka waa rooga, hab wanaagsan oo lagu go'doomiyo heerkulka cagaha. Waa dhammaadeen godadkii iyo qabatooyinkii si rooga sifiican loogu xajiyo, ama aad uga xun, isticmaal dhejisyo milmi ah oo hadhow ka taga hadhaaga aan macquul ahayn in laga saaro. Cajalad laba-geesood ah oo isku-dhejisan ayaa ah xalka ugu fiican markaad diyaarinayso sagxadahaaga roogga.
Qalabka codka ku xiraya xumbada: Marar badan habka ugu wanaagsan ee darbiyada aan codka lahayn waa rakibidda xumbada la dahaaray. Sameynta godad si loogu dhejiyo maaddada sida iftiinka sida xumbo la dahaaray ee darbiyada waa mid aan loo dhigmin, sidaas darteed, cajalad laba-geesood ah oo isku dhejisan ayaa mar kale xulafada ku ah howlahayaga DIY. Waxay bixin doontaa qabasho ku filan oo deggan.
Calaamadaha, boodhadhka iyo calaamadaha: Marar badan meheradeenna iyo dhismayaashayada waxaa lagu qasbay inaan saxeexno kuwa ku tiirsan, iyo sidoo kale meelaha laga baxo ama musqulaha. Si kastaba ha noqotee, adoo isticmaalaya xabagta la isku milmi karo waxay waxyeelo xad dhaaf ah u geysan kartaa qalabka, iyo sidoo kale calaamadaha ka taga Mar labaad, waxaan adeegsanay cajalad laba-geesle ah si aan u siino boodhadhkan, calaamadaha ama sumadaha haynta ay u qalmaan.
Muraayadda Muraayadda: Muraayaddu guud ahaan ma cusla oo waxay u baahan yihiin tallaabooyin adag. Si kastaba ha noqotee, qoditaanka godadka ama dhaqdhaqaaqa birta ah iyo mashquulka ee boolal badanaa waxay u geystaan ​​dhaawac aan laga soo kaban karin. Sidaa darteed, dhammaan muraayadahaas aan lahayn qaab-dhismeedka, cajalad laba-geesood ah ayaa ah tan kale, oo looga taxaddarayo muraayadda iyo derbiga.
Meeleynta khaanadaha jikada iyo musqulaha: Tilmaamaha ugu dambeeya ee aan kuu keenayno waa kan ugu caansan, meeleynta jillaabyada iyo armaajo, labadaba musqulaha iyo jikooyinka. derbiga, hab deggan, oo adkeysan doona waqtiga, qoyaanka iyo isbeddelka heerkulka.
tesa® Powerbond, qoyska ugu fiican cajaladaha xabagta ee labada dhinac leh
Dhammaan cajaladaha isku dhejiska ah ee laba-geesoodka ah isku mid ma aha, waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin, dhab ahaan, adeegsiga cajalado laba-geesood leh oo tayo-yar oo tayo hoose leh ayaa u horseedi kara dhaawac aan laga soo kaban karin qalabka aan dooneyno inaan hagaajino. Sidaas darteed, waxaan kugula talineynaa nooc caan ah qeybta, sida tesa, kaas oo leh noocyo badan oo cajalado isku dhejisan oo laba-geesood ah oo hoos imanaya saxiixa Powerbond.
Waxyaabahani waxay noo oggolaan doonaan inaan qabanno qalabka iyada oo aan wasakh lahayn, dhibaato la'aan iyo daloolin la'aan. Waad ku mahadsan tahay badeecadahan loo yaqaan 'tesa', waxaan u haysan doonnaa cajalad laba-dhinac ah oo isku dhejisan mid kasta oo ka mid ah aagagga aan qiyaasi karno: Gudaha, muraayada, bannaanka, codsiyada hufan iyo kuwa aadka u xooggan.
Tesa Powerbond cajaladaha koolada iyo codsiyadooda
Ultra Power Power adag: Haddii aad la macaamilayso shaqooyin qabyo-sare ah, kani waa cajaladdaada dhejiska laba-geesoodka ah. Waxay taageertaa ilaa 10 kg 10 kiiloo mitir cajalad ah.
Gudaha Powerbond: Kufiican barnaamijyada kaladuwan ee guriga, waxay si gaar ah ugu habboon tahay hagaajinta walxaha gudaha, sidaas darteed waxay noqon doontaa wehel ku habboon howlahayaga aasaasiga ah ee DIY. Waxay taageertaa ilaa 5 kg 10 kiilomitir cajalad ah. Lagu muujiyey caagagga, dusiyeen iyo qoryo.
Muraayadaha Powerbond: Ku habboon meelaha leh qoyaan badan, sida musqulaha iyo jikada. Waxay haysaa muraayadaha ilaa 70 × 70 cm iyo ilaa 4 mm qaro weyn iyadoo aan lahayn khatarta ugu yar inay dhacdo.
Bannaanka Awoodda: Waxaan ku diyaarinay shaqadeena banaanka guriga, banaanka. UV iyo biyaha u adkaysta, waxay bixisaa taageero aan caadi ahayn. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay walxaha fidsan oo leh dhumuc ilaa 10 mm iyo dusha sare oo siman oo adag. Qalabka kala duwan ee awood u leh hagaajinta ayaa aad u ballaaran.
Transbrent Powerbond: Ku habboon walxaha hufan, waxay noqoneysaa mid aan la ogaan oo waa xanaaq badan oo faa'iido leh. Waxay taageertaa ilaa 2 kg 10 kiiloo mitir cajalad ah. Sidoo kale noocyo kala duwan oo iswaafaqsan.
Waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka tesa®powerbond?
Cajaladahaas wejiga duubani waa sida ay u fududahay in loo isticmaalo sida kuwa kale, markaa waa inaadan ka baqin astaamahooda hagaajinta ee cajiibka ah. Waxay leeyihiin muuqaal gaar ah, waa kuwo xasaasi ah oo xasaasi ah, sidaa darteed waxay ku hagaajin doonaan dadaal dheeri ah walxahaas aan ku qaadnay cadaadis weyn waqtiga rakibida. Tilmaamaha isku imaatinka waxaan ku qanacsaneyn doonaa in waqtiga ugu yar ee cadaadiska barta hagaajinta ay tahay ugu yaraan shan ilbiriqsi, si loo hubiyo natiijo hagaagsan
Si kastaba ha noqotee, kooxda tesa waxay leeyihiin heshiis wanaagsan oo talo iyo tilmaamid ah oo loogu isticmaalo www.tesatape.es, meesha ugufiican si loo hubiyo waxa badeecada ay tahay inaan iibsano.
Dhanka kale, waa bedelka ugu raqiisan uguna dhib yar walxaha aan rabno inaan hagaajino. Dhinaca kale, waxay naga badbaadin doontaa waqti iyo lacagba in aan ku sameysano xargaha mashiinnada.Tan iyo in ka badanba, cajalad laba-geesood ah oo isku dhejisan ayaa ah saaxiibka ugu fiican ee howlahayaga DIY.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Cajalad laba-geesood ah, oo ah saaxiibka ugu fiican ee DIY guriga
Saddexda Timo jarjar ee Casriga ah ee loo yaqaan 'Balmain Hair Couture'
Siyaabaha ugufiican ee loo xiro dharka korka deyrta